Wasaaradda Maaliyadda DFS oo ka jawaabtay eedeyn uu u jeedisay Hirshabelle (Akhriso) – Idil News
Wasaaradda Maaliyadda DFS oo ka jawaabtay eedeyn uu u jeedisay Hirshabelle (Akhriso)
Posted By: Jibril Qoobey May 14, 2021
Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn uga timid maamulka Hirshabeelle oo ay sheegeen in ay xayirtay lacago loogu tala galay in wax looga qabto Fatahaada wabiga Shabeelle.
War kasoo baxay Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa sidaan u qornaa:
Wasaaradda Maaliyadda ee DFS, markay aragtay war saxaafadeedka ka soo baxay Guddiga Maamulka Hirshabelle ee maaraynta musiibooyinka, waxay caddaynasaa sida ay u socdaan hawlaha ka hortagga fatahaadaha ee Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) ka waddo Dawlad Goboleedka Hirshabelle.
1. Mashruuca waxa uu bilaabay qiimeynta baahida ka hortagga fatahaadaha webiyada Shabelle iyo Jubba 27 Marso 2021. Qorshaynta hawlaha waxaa si wadajir ah u fuliyay Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) iyo dawlad Goboleedka aan kor ku xusnay.
2. Waxaa la sahmiyay 71 goobood oo laga fulinayo ka hortagga fatahaadaha.
3. Waxaa la diyaariyay naqshadaynta loo raacaayo biyo xirista 5 April 2021.
4. Waxaa la furay u tartanka fulinta hawlaha ka hortagga fatahaadda.
5. Waxaa soo tartamay 44 qandarasleyaal oo maamulka Hirshabelle soo xulay (Jowhar 19 iyo Beletwayne – 25)
6. Laba shirkadood ayaa hadda hawlo biyo xirid ah ka wada 7 goobood (sites) gobolka Hiiraan.
7. Waxaa diyaar ah 10 qandaraaslayaal (contractors ) oo hawlgeli doona usbuuca soo socda: 6 shirkadood oo ka howlgali doonna Beletwayne iyo 4 ka howlgali doonna Jowhar iyo nawaaxigeeda. Wasaaradda Maaliyadda ee DFS waxay dhibaatada fatahaadaha la qaybsanaysaa Dowlad Goboleedka iyo shacbiga reer Hirshabelle.